I-Vega 15-intshi ICD, imifanekiso | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-15-intshi yeVega ICD, imifanekiso
Inkampani ye-ICD ibhengeze iiveki ezimbalwa ezidlulileyo ukufakwa kwikhathalogu yayo ezimbini ithebhulethi enenkqubo ye-Android, ixesha le 7 intshi kunye nezinye ezingekho ngaphantsi kwee-intshi ezili-15. Njengoko ebengaphoswa ngumsitho weempawu ze-CES, ebekhona apho kwaye sinokuwuxabisa ngemifanekiso. Kuyamangalisa ubuncinci obunokubongwa.
Ezi zixhobo zisebenzisa i Itegra 250 chip kwaziwa njenge I-NVIDIA Tegra 2. Le chip inempawu zayo eziphambili ezisebenza phantsi kwe-chip I-ARM Cortex A9 1 Ghz isantya kwaye kubandakanya iiprosesa ezizimeleyo ezisi-8 kwezona ziphambili ezilawula yonke into enxulumene nemultimedia kunye nokukhawulezisa i-3D.
Inkqubo yokusebenza ene ICD Vega es Android 2.0 nangona ayifani njengoko sisazi kwiifowuni kuba ziye zahlengahlengiswa kwezi zixhobo kwaye umzekelo Android Market ayikho.
Isikrini sinesisombululo seepikseli ze-1377 × 768 kwaye sinenkxaso ye-angled ephethe itheyibhile ngokuthe nkqo kwaye sisithethi. Zonke ezinye iimpawu zezi apha.
Ukufika kwayo kwintengiso kulindeleke ukuba uphele lo nyaka, nangona kungekho maxabiso alindelweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » I-15-intshi yeVega ICD, imifanekiso